Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Wareysi: C/hi Yuusuf Weerar ” Nin Ooyaya Afkiisu Masama!
Wareysi: C/hi Yuusuf Weerar ” Nin Ooyaya Afkiisu Masama!
October 20, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Warbaahinta Xaajo oo wareysi kooban la yeelatay Madaxweyne Kuxigeenka Dawladda Deegaanka Soomaalida ahna hoggaanka Nabadgalyada Cabdullaahi Yuusuf Weerar waxaana wax ka waydiinay arimahii heshiiska iyo wada hadalkii ka dhacay Nairobi iyo warar badan oo suuqa galay.
Mar aan wax ka weydiinay arimiha la xidhiidha shirkii iyo heshiiskii burburay ayuu madaxweyne kuxigeenku ku sheegey inay arintaasi goaankeeda dhabta ah ay tahay mid u taalla Xukuumadda Deegaanka Somaalida.
” Horta nin Ooyaya Afkiisu ma samo awalna run loogama baranin. Heshiiska waxaa shardi u ah qaadashada dastuurka Ethiopia” Madaxweyne kuxigeenka ayaa sheegay in dawladda Deegaanka Soomaalidu ay sii labanlaabayso dadaalka nabad galyada iyo hormarinta waddanka.
Mar aan wax ka waydiinay Cabdullaahi Weerar hadalada suuqa ku jira ee la xiriira in maamulka deegaanka khalkhal ka jiro ayuu sheegey iney arintaasi tahay uun beentii iyo waxii la sheegi jiray. ” Xukuumaddu waxey leedahay saddex madaxweyne ku xigeen oo garba siman mana jiro midka 1aad , ama labaad ama saddexaad. Madaxweyne Cabdi Maxamuud waxuu ku maqan yahay Addisababa shaqo ayuuna u tagay waxuuna soo dhaweynayaa isla markaana kulan la leeyahay waftigii ka qaybgashay wadahadalkii Nairobi isagaana markii horena anba bixiyay.”
Weerar ayaa isagoo kala qeexaya kooxda Asmara sheegey inay kooxdan tahay laba qaybood waxuuna yidhi ” Waa laba qaybood; Qayb ganacsato ah oo aan dan iyo aabo ka lahayn waxii nool ama dhinta, dibadahana wareega iyo wiilal masaakiin ah oo maskaxda laga qasay. Marka waxaan usheegeynaa wiilashaas geeljirayaasha ahi iney dalkooda iyo umaddooda dhinac ka raacaan balse kuwa ganacstada ah waxaa ku adag iney ganacsigooda iska xiraan”.
Madaxweyne kuxigeen Weerar ayaa sheegay in xukuumadda Deegaanka oo ku tashaneysa shacabkeeda ay ka dharagsan tahay dhagarta kooxda ka ganacsata dhiigga shacaba sida uu hadalka udhigey.
Shirkii Nairobi ee udhaxeeyay Ethiopia iyo garabka Asmara ayaa hakaday iyadoo dhanka kooxda Admiraalku ay sheegtey in la weydiiyey iney dastuurka qaataan meesha dhanka Ethiopiyana ay u arkeen iney qasab tahay in ama ay dastuurka qaataan ama ay iska daayaan.